Sida loo Daawo Movies on iPhone
> Resource > iPhone > Sidee u daawan karaa Movies On iPhone
Ayaa qorsheyneysa in aad si aad u daawato qaar ka mid ah filimada in aad seegay inta lagu jiro fasaxa? Ha aad rabto inaad si qaar ka mid ah qabsasho aad iPhone laakiin ka walwalsan of qaabka video file in la taageero doona qalab aad? Ha welwelina, Waxaan halkaan u joogaa inaan caawiyo.
Haddii aad rabto in aad kala soo bixi more videos in aad 'to-watch' list, waxa kale oo aad samayn kartaa in ka dibna cadaadin ama badalo kuwa video files for loo maqli aad iPhone. Maaddaama ay liiska dhagan iyo fogeynta ah oo ay taageerayaan qaabab video for iPhone, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo files (sida VOB, MKV, RMVB, MTS iyo iwm) in ay yihiin gooshayso liiska ay taageerayaan ka hor inta aanad si dhab ah u daawan kartaa iPhone . La mid ah videos kuwa badbaadaya qaab file hooyo Apple ee laakiin la codecs leheyn.
Fiiri sida aad si habab ku qoran sida samayn karaa Habka 1: Iyada oo ah video Converter online ama; Habka 2: Desktop Converter .
Habka 1: Online Video Converter
Waxaad isticmaali kartaa online video Converter free hoos ku qoran. Waxaad si fudud u bedeli karaan faylasha video in aan ay taageerayaan aad iPhone. Habka la isticmaalo oo ah video Converter online waa halkii sahlan.
Haddii aad rabto in aad online video converters dheeraad ah oo lacag la'aan ah, oo kaliya halkan u hesho, liiska online video converters
Ma jiro download ama rakibaadda loo baahan yahay; kaliya aad leedahay si aad u geliyaan faylkaaga, qaabab wax soo saarka dhigay, ka dibna bilaabaan in ay converte. Qaar ka mid ah dib u dhacyo ka mid ah xawaaraha aad diinta ama download taas oo si weyn ugu tiirsan tahay internet-aad iyo sidoo kale qaabka file saarka xadidan. Haddii aad u baahan tahay si ay u awoodaan in ay ka badan oo aad samayn videos, isku day inaad ka soo Converter desktop ah halkii.
Converter desktop A ka dhawaajiyaan kartaa wax badan oo ka mid ah shaqo adag haddii aadan mid ka mid isku dayay hor. Si kastaba ha ahaatee, interface quruxsan oo weli user-friendly ah ee Converter Wondershare Video Ultimate u Mac awood u yeelan doonaan in ay bixiyaan aad video Bulshda dheeraad ah. Waxaad dooran kartaa in mid uun aad loogu badalo video files ku yaalla si toos ah ama si ay u xaalkaa ka hor loo maqli karo iyo sidoo kale kala soo bixi clips aad jeceshahay off goobta geeyo iyo siinayaa ikhtiyaarka ah in la gubo galay DVD ah sida ururinta.
Waxaa jira dhicitaanka u lahayn in ay version maxkamadda iyo sidoo kale socon for Windows PC. Kale badan ay awoodaan in ay meel isugu soo diyaariyeen badan oo ah qaabab wax soo saarka, waxaa sidoo kale loogu badalo karaan faylasha aad ilaa 30X dhakhso leh AAN tayada khasaaro . Continue hoose hanuun dheeraad ah oo ku saabsan sida aad si dhab ah u shaqayn kartaa qaar ka mid ah qaababka badan oo la dhisay-in si Wondershare Video Converter Ultimate ah.
Riixo Direct ama diinta
Jiid-iyo-hoos u dhac video files gal Converter
Dooro qaab saarka ka Videos (haddii aad taqaan nooca gaarka ah file aad u baahan tahay) ama Qalabka (presets ku salaysan brand iyo model ee qalabka)
Riix badalo (rukun-xaq u hooseysa interface ah)
Edit hor daawashada
Riix Edit icon (si aad xaalkaa videos)
Guba videos galay DVD ah
Dul u Gubashada tab 's (on top of interface)
Riix Edit icon (si aad xaalkaa videos haddii aad rabto)
Dooro menu DVD ama template
Dooro Guba hor dhag siinaya batoonka tallaabada (hoose-xaq ah interface)